Rules and Regulations - Vakok Online Gaming Community!
Monthly Kills List
Vakok Faction Status
Poker Point Exchange
Vakok ၏ စည်းကမ်း နှင့် မူဝါဒများ
******* Rules and Regulations of Vakok *******
(Applied for Both Pandora and Reborn)
Rules 1.1 - Players are forbidden to use any cheat or hack.
If you are found cheating or hacking your account will be banned.
- If you are found cheating or hacking for 1st time your Character will be banned 1000 days, for the second time your account will be suspended PERMANENTLY.
စည်းကမ်း ၁.၁ ။ ကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်း Hacking နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ ကစားခြင်းမှ အထူးတားမြစ်သည်။
- စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက ပထမအကြိမ် အဖြစ် Character အား ဂိမ်းကစားခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းခံရမည်။ Same Account မှ ဒုတိယ အကြိမ်ဖေါက်ဖျက်ပါက Account အား ရာသက်ပန် ကစားခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်။ထို့အပြင် Player vs Player battle/battle ground များတွင် hack software အသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်နေတာကို တွေ့ရှိပါက
character ကိုပါ Delete လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Rules 1.1.1 - If you are using Hacking Software several times with several account, Your account will be banned PERMANENTLY and your IP will be banned for 1day to 10 days, no excuse.
စည်းကမ်း ၁.၁.၁ ။ ကစားသူများသည် Hacking Software အား IP တခုထဲမှ အကြိမ်ရေအတွက် များစွာ အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရှိပါက Account များကို ဂိမ်းကစားခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီးထိုကစားသူ၏ IP အား ၁ရက် မှ ၁၀ ရက်အထိ ဘန်းမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် Player vs Player battle/battle ground များတွင် hack software အသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်နေတာကို တွေ့ရှိပါက
Rules 1.2 - Players are forbidden to abuse bug.( Eg: Warhorse at Icecrown )
- If you are found abusing bug your account will be ban for some time according to your action ( Ranging from 1days to 10days )
စည်းကမ်း ၁.၂ ။ ကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်းမှားယွင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေသော Bug များကို အသုံးချ၍အခြားကစားသူများအပေါ်အနိုင်ယူခြင်းမှ တားမြစ်သည်။ (ဥပမာ Quest Item အသုံးပြု၍ သတ်ခြင်း)
- စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက ၁ရက်မှ ၁၀ရက် အထိ ကစားခွင့် ရပ်ဆိုင်းမည်။
Rules 1.2.1 - All PLAYERS MUST report every bug quest items,spells in-game.If you don't report and use for
your own good , you will be punished according to Rules 1.2 i
Official bug report – https://www.facebook.com/groups/vkwow/
စည်းကမ်း ၁.၂.၁ ။ ကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်းမှားယွင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေသော Bug Item,Spells များကို တာဝန်ရှိသူများအားအသိပေးအပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး ထို bug item, spells များကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခြင်းမှ တားမြစ်သည်။
- တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပါက စည်းကမ်း ၁.၂ အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။
Bug Report အား Vakok Facebook ဖြစ်သော https://www.facebook.com/groups/vkwow/ တွင် Report တင်ပါ။
Rules 1.3 - Players are forbidden to use Bugitems for leveling.
- If you are found using them, Items will be taken back without any questions.
စည်းကမ်း ၁.၃ ။ ကစားသူများသည် bug item များကို မိမိ/သူတပါး အကျိုးအတွက် အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
- အသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက မေးမြန်းခြင်းမရှိ ပြန်လည်သိမ်းယူသွားမည်။
Rules 1.4 - Players are forbidden to use false language on GMs, Staff of vakok and other fellow players.
- If you are reported using false language, your account will be banned accordingly.
စည်းကမ်း ၁.၄ ။ ကစားသူများသည် Vakok မှ Admin များ၊ GM များ နှင့် ကစားသူများအားလုံးအပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက် စော်ကားခြင်း ၊ အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံမှုမရှိပဲစွတ်စွဲပြောဆိုခြင်း ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း ၊ သရော်ခြင်း များလုံးဝမပြုလုပ်ရန်တားမြစ်သည်။
တားမြစ်ချက်ကုိုဖောက်ဖျက်ပါက ဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်၍ vakok တွင် ကစားခွင့် (၁ ရက် မှ ရာသက်ပန် အထိ) ရပ်ဆိုင်းခံ၇မည်။
Rules 1.5 - Players are forbidden to ask Items, gold, skill and spell from GM. Asking help from GM for ICC. Asking Unlock instance from GM.
- If you ask, you will be ignored without any question.
စည်းကမ်း ၁.၅ ။ ကစားသူများသည် Admin များ / GMများထံမှ မည်သည့် အရာဝတ္တု ပစ္စည်း / အခွင့်အရေးကိုမျှ တောင်းဆိုခြင်းမပြုရ။
တောင်းဆိုလာပါလျှင်လဲ မည်သူမှ ပြန်လည်ဖြေကြား/ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Rules 1.6 - Players are forbidden to spam in the Cities and Chat channel. If you are found spam you will be muted for3hours.
စည်းကမ်း ၁.၆ ။ ကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်းအခြားသော ကစားသူများ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လောက်အောင် စာများကို ဆက်တိုက်မပြတ်(Spamming) ရိုက်လွှင့်နေခြင်းအား တားမြစ်သည်။
တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပါက စကားပြောခွင့် ၃နာရီ ရပ်ဆိုင်းခံရမည်။
Rules 1.7 - Players are Strictly PROHIBITED to advertise other server in-game.
- If you are reported doing this, your account will be SUSPENDED PERMANENTLY.
စည်းကမ်း ၁.၇ ။ ကစားသူများသည် ဂိမ်းအတွင်း၌ Vakok နှင့်မပါတ်သတ်သော အခြား ဂိမ်းဆာဗာများ အကြောင်းပြောဆိုခြင်း / ကြေငြာခြင်းအားအထူးတားမြစ်သည်။
-တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပါက ကစားခွင့်ကို ရာသက်ပန် ရပ်ဆိုင်းမည်။
Rules 1.8 - Faking as GM is the violation of the rule of the server and your character will be DELETED.
စည်းကမ်း ၁.၈ ။ Admin / GM အဖြစ် ဟန်ဆောင်လိမ်လည်ခြင်းကိုတွေ့ ရှိပါက သင်၏ character အား ဖျက်ပစ်ခြင်းခံရမည်။
Rules 1.9 - Making funny of GM name, Swearing GM name in your character will lead to your account banned PERMANENTLY.
စည်းကမ်း ၁.၉ ။ သင်၏ character နာမည်တွင် Admin /GM များ၏ နာမည်များအား သရော်ခြင်း ၊ ဆဲဆိုခြင်းများ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ပါကရာသက်ပန် ကစားခွင့် ရပ်ဆုိုင်းခြင်းခံရမည်။
Rules 1.9.1 - If you created your character with rude; uncouth words, your account will be banned PERMANENTLY.
စည်းကမ်း ၁.၉.၁ ။ သင်၏ character နာမည်တွင်ရိုင်းစိုင်းသော အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့် နာမည်များ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ပါက ရာသက်ပန်ကစားခွင့် ရပ်ဆုိုင်းခြင်းခံရမည်။
Rules 2.1 - Players are forbidden to use false language and making funny of other faction player in Vakok Facebook Group. If you are found doing this, your account will be banned from Vakok Group.
စည်းကမ်း ၂.၁ ။ ကစားသူများသည် မိမိ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အသင်းအဖွဲ့ အား သရော်ခြင်း ၊ လှောင်ပြောင်ခြင်း ၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်း ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွားခြင်းများ တွေ့ရှိပါက သင့်အား Vakok Facebook Group မှ မောင်းထုတ်ခြင်းခံရမည်။
Rules 2.2 - Players are strictly prohibited to Spam in in-game, Facebook and Chat Box.
စည်းကမ်း ၂.၂ ။ Game , facebook နှင့် Chat boxအတွင်း သူတပါး အသုံးပြု၍မရအောင် Spam လုပ်ခြင်း နှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။
Rules 2.3 - Players are forbidden to advertise other server in Facebook and Ingame. If you are found doing this your account will be DELETED.
စည်းကမ်း ၂.၃ ။ အခြားဆာဗာ နှင့် ဂိမ်းများ အကြောင်းအား Facebook Group နှင့် vakok Website အတွင်း၌ ပြောဆိုခြင်း / ကြေငြာခြင်းများတွေ့ရှိပါကအသုံးပြုခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်။
Rules 2.4 - Using false language in the Vakok Facebook Group or website is strictly prohibited. If you are found doing this your account will be DELETED.
စည်းကမ်း ၂.၄ ။ Facebook (သို့ ) Website အတွင်းဆဲရေးခြင်း၊ သရော်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းများတွေ့ရှိပါအသုံးပြုခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်။
Rules 2.5 - Using red color font in Forum is prohibited. If you are using red color font, your post will be deleted.
စည်းကမ်း ၂.၅ ။ Forum တွင် Player များ အနီရောင်font color ဖြင့်မသုံးစွဲရ၊ သုံးစွဲပါက ပထမအကြိမ် သတိပေးမည်။ ဒုတိယ အကြိမ် အကောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည်။
Regulation 1.1 - GM won't answer your Ticket without full information in Game.
မူဝါဒ ၁.၁ - သင်းအချက်အလက် အပြည့်စုံမပါဝင်သော Ticket များကို GM များဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ( ဥပမာ .. GM lar par ohn, Help me, Bug, Plz come, etc .. )
Regulation 1.2 - If you are found some GMs doing their work wrong. Report in the Vakok Official Facebook Group with FULL INFORMATION.( Post without full information will be deleted on SIGHT )
- Any post without actual information will be mark as an offensive to serverand will be deleted.
မူဝါဒ ၁. ၂ - ကစားသူများသည် Vakok GM များ စည်းကမ်းဖေါက်ဖြတ်ခြင်း ၊ ဘက်လိုက်ခြင်း ၊ ဆဲဆိုခြင်း ၊ စည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ခြင်းများ တွေ့ ရှိပါက Vakok Official Facebook Group https://www.facebook.com/groups/vkwow/ တွင် အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံဖြင့် တိုင်ကြားပါ။
- တိကျသေချာမှုမရှိသော အချက်အလက်မစုံသောသတင်းပို့မှုများကို ချက်ချင်းဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အရေးယူမှုကိုမျှလုပ်မည် မဟုတ်ပါ)
Regulation 1.3 - If you think some of the players have items that are not obtainable in the game. Report in the vakok official facebook group with FULL INFORMATION.
မူဝါဒ ၁.၃ ။ ကစားသူတယောက်အနေဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ခွင့်မရှိသော item များ အသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့ရှိပါက ဖိုရမ်တွင်အချက်အလက်စုံလင်စွာဖြင့် သတင်းပို့ပါ။
Regulation 1.4 - Any post in the Facebook without any information will be marked as Spam or an offensive to server and will be deleted.
မူဝါဒ ၁.၄ ။ Facebook Group တွင် မည်သည့် အကြောင်းအရာမဆိုအချက်အလက် အခိုင်အလုံမရှိပဲ ရေးသားထားပါက ဖိုရမ်အမှိုက်အဖြစ်သော်၎င်း ဆာဗာအားထိခိုက်စော်ကားနေခြင်းဟု၎င်း ယူဆ၍ ဖျက်ပစ်ခြင်းခံရမည်။
Regulation 1.5 - If you found any players using illegal spell ( Warrior using priest spell ) Report in the Facebook with FULLINFORMATION.
မူဝါဒ ၁.၅ ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်မှသူ၏အသုံးပြုနိုင်သော spell များမဟုတ်ပဲ အခြား class များမှ spellသုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါက facebook တွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် သတင်းပို့ပါ။
Regulation 1.6 - Complain post without information will be neglected.
မူဝါဒ ၁.၆ ။ အချက်အလက်အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိသည့် complain များအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Exception Rules 1.1 - If you are found hacking in some extreme situation you will be banned PERMANENTLY. ( In War song Gulch ,PvP , raiding etc )
Exception Rules 1.2 - If you use false language on the GMs, You will be taken action according to that GM, so there is no exact Ban time.
** MORE RULES will be added as if need.
Vakok ၏ စညျးကမျး နှငျ့ မူဝါဒမြား
စညျးကမျး ၁.၁ ။ ကစားသူမြားသညျ ဂိမျးအတှငျး Hacking နညျးလမျးမြား အသုံးပွု၍ ကစားခွငျးမှ အထူးတားမွဈသညျ။
- စညျးကမျးဖောကျဖကျြခွငျးကိုတှရှေိ့ပါက ပထမအကွိမျ အဖွဈ Character အား ဂိမျးကစားခွငျးမှ ရပျဆိုငျးခံရမညျ။ Same Account မှ ဒုတိယ အကွိမျဖေါကျဖကျြပါက Account အား ရာသကျပနျ ကစားခှငျ့ရပျဆိုငျးမညျ။ထို့အပွငျ Player vs Player battle/battle ground မြားတှငျ hack software အသုံးပွုခွငျးမြားပွုလုပျနတောကို တှရှေိ့ပါက
character ကိုပါ Delete လုပျမှာဖွဈပါတယျ။
စညျးကမျး ၁.၁.၁ ။ ကစားသူမြားသညျ Hacking Software အား IP တခုထဲမှ အကွိမျရအေတှကျ မြားစှာ အသုံးပွုနသေညျကို တှရှေိ့ပါက Account မြားကို ဂိမျးကစားခွငျးမှ ရပျဆိုငျးခံရမညျဖွဈပွီးထိုကစားသူ၏ IP အား ၁ရကျ မှ ၁၀ ရကျအထိ ဘနျးမညျဖွဈသညျ။ထို့အပွငျ Player vs Player battle/battle ground မြားတှငျ hack software အသုံးပွုခွငျးမြားပွုလုပျနတောကို တှရှေိ့ပါက
စညျးကမျး ၁.၂ ။ ကစားသူမြားသညျ ဂိမျးအတှငျးမှားယှငျးစှာဖွဈပျေါနသေော Bug မြားကို အသုံးခြ၍အခွားကစားသူမြားအပျေါအနိုငျယူခွငျးမှ တားမွဈသညျ။ (ဥပမာ Quest Item အသုံးပွု၍ သတျခွငျး)
- စညျးကမျးဖောကျဖကျြခွငျးကိုတှရှေိ့ပါက ၁ရကျမှ ၁၀ရကျ အထိ ကစားခှငျ့ ရပျဆိုငျးမညျ။
စညျးကမျး ၁.၂.၁ ။ ကစားသူမြားသညျ ဂိမျးအတှငျးမှားယှငျးစှာဖွဈပျေါနသေော Bug Item,Spells မြားကို တာဝနျရှိသူမြားအားအသိပေးအပျနှံရမညျဖွဈပွီး ထို bug item, spells မြားကို ကိုယျကြိုးအတှကျအသုံးခခြွငျးမှ တားမွဈသညျ။
- တားမွဈခကျြကိုဖောကျဖကျြပါက စညျးကမျး ၁.၂ အရ အရေးယူခွငျးခံရမညျ။
Bug Report အား Vakok Facebook ဖွဈသော https://www.facebook.com/groups/vkwow/ တှငျ Report တငျပါ။
စညျးကမျး ၁.၃ ။ ကစားသူမြားသညျ bug item မြားကို မိမိ/သူတပါး အကြိုးအတှကျ အသုံးပွုခွငျးမပွုရ။
- အသုံးပွုခွငျးကိုတှရှေိ့ပါက မေးမွနျးခွငျးမရှိ ပွနျလညျသိမျးယူသှားမညျ။
စညျးကမျး ၁.၄ ။ ကစားသူမြားသညျ Vakok မှ Admin မြား၊ GM မြား နှငျ့ ကစားသူမြားအားလုံးအပါအဝငျ မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမြှပုဂ်ဂိုလျရေးထိခိုကျ စျောကားခွငျး ၊ အကွောငျးပွခကျြ ခိုငျလုံမှုမရှိပဲစှတျစှဲပွောဆိုခွငျး ၊ ဆဲရေးတိုငျးထှာခွငျး ၊ သရျောခွငျး မြားလုံးဝမပွုလုပျရနျတားမွဈသညျ။
တားမွဈခကျြကိုဖောကျဖကျြပါက ဖွဈစဉျပျေါမူတညျ၍ vakok တှငျ ကစားခှငျ့ (၁ ရကျ မှ ရာသကျပနျ အထိ) ရပျဆိုငျးခံ၇မညျ။
စညျးကမျး ၁.၅ ။ ကစားသူမြားသညျ Admin မြား / GMမြားထံမှ မညျသညျ့ အရာဝတ်တု ပစ်စညျး / အခှငျ့အရေးကိုမြှ တောငျးဆိုခွငျးမပွုရ။
တောငျးဆိုလာပါလြှငျလဲ မညျသူမှ ပွနျလညျဖွကွေား/ဆောငျရှကျပေးမညျမဟုတျပါ။
စညျးကမျး ၁.၆ ။ ကစားသူမြားသညျ ဂိမျးအတှငျးအခွားသော ကစားသူမြား အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈလောကျအောငျ စာမြားကို ဆကျတိုကျမပွတျ(Spamming) ရိုကျလှငျ့နခွေငျးအား တားမွဈသညျ။
တားမွဈခကျြကိုဖောကျဖကျြပါက စကားပွောခှငျ့ ၃နာရီ ရပျဆိုငျးခံရမညျ။
စညျးကမျး ၁.၇ ။ ကစားသူမြားသညျ ဂိမျးအတှငျး၌ Vakok နှငျ့မပါတျသတျသော အခွား ဂိမျးဆာဗာမြား အကွောငျးပွောဆိုခွငျး / ကွငွောခွငျးအားအထူးတားမွဈသညျ။
-တားမွဈခကျြကိုဖောကျဖကျြပါက ကစားခှငျ့ကို ရာသကျပနျ ရပျဆိုငျးမညျ။
စညျးကမျး ၁.၈ ။ Admin / GM အဖွဈ ဟနျဆောငျလိမျလညျခွငျးကိုတှရှေိ့ပါက သငျ၏ character အား ဖကျြပဈခွငျးခံရမညျ။
စညျးကမျး ၁.၉ ။ သငျ၏ character နာမညျတှငျ Admin /GM မြား၏ နာမညျမြားအား သရျောခွငျး ၊ ဆဲဆိုခွငျးမြား ထညျ့သှငျး ပွုလုပျပါကရာသကျပနျ ကစားခှငျ့ ရပျဆိုငျးခွငျးခံရမညျ။
စညျးကမျး ၁.၉.၁ ။ သငျ၏ character နာမညျတှငျရိုငျးစိုငျးသော အဓိပ်ပာယျသကျရောကျသညျ့ နာမညျမြား ထညျ့သှငျး ပွုလုပျပါက ရာသကျပနျကစားခှငျ့ ရပျဆိုငျးခွငျးခံရမညျ။
စညျးကမျး ၂.၁ ။ ကစားသူမြားသညျ မိမိ၏ ဆနျ့ကငျြဘကျအသငျးအဖှဲ့ အား သရျောခွငျး ၊ လှောငျပွောငျခွငျး ၊ပုဂ်ဂိုလျရေးပုတျခတျပွောဆိုခွငျး ၊ ဆဲရေးတိုငျးထှားခွငျးမြား တှရှေိ့ပါက သငျ့အား Vakok Facebook Group မှ မောငျးထုတျခွငျးခံရမညျ။
စညျးကမျး ၂.၂ ။ Game , facebook နှငျ့ Chat boxအတှငျး သူတပါး အသုံးပွု၍မရအောငျ Spam လုပျခွငျး နှောငျ့ယှကျခွငျး မပွုရ။
စညျးကမျး ၂.၃ ။ အခွားဆာဗာ နှငျ့ ဂိမျးမြား အကွောငျးအား Facebook Group နှငျ့ vakok Website အတှငျး၌ ပွောဆိုခွငျး / ကွငွောခွငျးမြားတှရှေိ့ပါကအသုံးပွုခှငျ့ရပျဆိုငျးမညျ။
စညျးကမျး ၂.၄ ။ Facebook (သို့) Website အတှငျးဆဲရေးခွငျး၊ သရျောခွငျး၊ ပုဂ်ဂိုလျရေး ပုတျခတျပွောဆိုခွငျးမြားတှရှေိ့ပါအသုံးပွုခှငျ့ရပျဆိုငျးမညျ။
စညျးကမျး ၂.၅ ။ Forum တှငျ Player မြား အနီရောငျfont color ဖွငျ့မသုံးစှဲရ၊ သုံးစှဲပါက ပထမအကွိမျ သတိပေးမညျ။ ဒုတိယ အကွိမျ အကောငျ့ဖကျြသိမျးခွငျးခံရမညျ။
မူဝါဒ ၁.၁ - သငျးအခကျြအလကျ အပွညျ့စုံမပါဝငျသော Ticket မြားကို GM မြားဖွရှေငျးပေးလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ( ဥပမာ .. GM lar par ohn, Help me, Bug, Plz come, etc .. )
မူဝါဒ ၁. ၂ - ကစားသူမြားသညျ Vakok GM မြား စညျးကမျးဖေါကျဖွတျခွငျး ၊ ဘကျလိုကျခွငျး ၊ ဆဲဆိုခွငျး ၊ စညျးကမျးနှငျ့ မညီညှတျခွငျးမြား တှရှေိ့ပါက Vakok Official Facebook Group https://www.facebook.com/groups/vkwow/ တှငျ အကွောငျးအရာ အပွညျ့အစုံဖွငျ့ တိုငျကွားပါ။
- တိကသြခြောမှုမရှိသော အခကျြအလကျမစုံသောသတငျးပို့မှုမြားကို ခကျြခငျြးဖကျြပဈမညျဖွဈပွီး မညျသညျ့အရေးယူမှုကိုမြှလုပျမညျ မဟုတျပါ)
မူဝါဒ ၁.၃ ။ ကစားသူတယောကျအနဖွေငျ့သုံးစှဲနိုငျခှငျ့မရှိသော item မြား အသုံးပွုနသေညျကိုတှရှေိ့ပါက ဖိုရမျတှငျအခကျြအလကျစုံလငျစှာဖွငျ့ သတငျးပို့ပါ။
မူဝါဒ ၁.၄ ။ Facebook Group တှငျ မညျသညျ့ အကွောငျးအရာမဆိုအခကျြအလကျ အခိုငျအလုံမရှိပဲ ရေးသားထားပါက ဖိုရမျအမှိုကျအဖွဈသျော၎င်းငျး ဆာဗာအားထိခိုကျစျောကားနခွေငျးဟု၎င်းငျး ယူဆ၍ ဖကျြပဈခွငျးခံရမညျ။
မူဝါဒ ၁.၅ ။ အကယျ၍ တဈစုံတဈယောကျမှသူ၏အသုံးပွုနိုငျသော spell မြားမဟုတျပဲ အခွား class မြားမှ spellသုံးနသေညျကိုတှရှေိ့ရပါက facebook တှငျ အခကျြအလကျပွညျ့စုံစှာဖွငျ့ သတငျးပို့ပါ။
မူဝါဒ ၁.၆ ။ အခကျြအလကျအကြိုးအကွောငျးခိုငျလုံမှုမရှိသညျ့ complain မြားအား အရေးယူ ဆောငျရှကျပေးမညျမဟုတျပါ။